Shiinaha Palmitoyl Tripeptide-5 warshad iyo saarayaasha | JYMed
Magaca Product: Palmitoyl Tripeptide-5
Formula kelli: C37H67F6N5O9
Miisaanka kelli: 839,959 g / mol
Imaanshaha: budada White
Codsiyada: maqaarka siman, anti-gabowga
Xidhmada: dhalada 10/20 / 50g / HDPE / PP, ama buuxiyey oo sida uu sheegay looga baahan yahay qofka macaamilka ah ee
Palmitoyl Tripeptide-5 wuxuu ka kooban yahay silsiladood oo acids amino, oo uu awood u leeyahay in ay dhex gasho epidermis iyo qoto dheer galaan maqaarkaba ah, halkaas oo ay u dareen-soo-saarka collagen iyo koritaanka unugyada caafimaadka qaba. Waa ma aha oo kaliya kor u dadajiyaa Avv collagen oo dubka, laakiin waxbarashada hore soo jeedinaya in peptide this ayaa sidoo kale waxa uu leeyahay awood u leh inay isgaadhsiin la unugyada maqaarka iyo ka hortagga sunta in iyaga dhex gelin dhibaato samaynaya. Walaxda ma this by qosol leh hababka isgaarsiinta dabiiciga ah ee jidhka ah in sheegi unugyada waxa la sameeyo. Noocan ah xidhiidhka ka caawisaa unugyada maqaarka in labada radi baxay sunta ama Eebay inert. gobolka dabiiciga ah Palmitoyl Tripeptide-5 ee waa in dareere cad in uu leeyahay ur lahayn oo waa biyo L. peptide Tani waxaa laga heli karaa in tiro ka mid ah waxyaabaha daryeelka maqaarka, laakiin waxaa la inta badan la isticmaalo ee kareemada anti-gabowga iyo serums wajiga. Palmitoyl Tripeptide-5 waxaa loo isticmaalaa in tiro ka mid ah waxyaabaha kala duwan anti-gabowga, sababta oo ah awoodda inay isgaadhsiin la unugyada maqaarka iyo kor loogu qaado wax soo saarka collagen. Young-raadinta, maqaarka adag suurto gal ahayn oo aan collagen, iyo maqaarka ka weyn helo, collagen yar u soo saarta. Shirkadaha soo saara serums anti-gabowga iyo kareemada isticmaalayso Palmitoyl Tripeptide-5 ma aha oo kaliya maxaa yeelay waxa ay sheegayaa unugyada maqaarka si kor loogu qaado wax soo saarka collagen dabiici ah, taas oo sidoo kale ka dhigayaa aadka wax ku ool ah, sida wax soo saarka kale oo ay ku jiraan collagen waxaa laga yaabaa in aad ugu weyn in si fiican loo dhex gelin maqaarka . Maxaa yeelay, Palmitoyl Tripeptide-5 gudaha ka soo shaqeeya si ay u kordhiyaan wax soo saarka collagen, waxaad arki kartaa natiijooyin fiican ka dhaqso badan aad doonaynin, haddii aad loo isticmaalo cream ama serum ka kooban collagen ka nudaha xayawaanka. Iyadoo waxbarashada ku saabsan Palmitoyl Tripeptide-5 ayaa weli ku jira marxaladaha hore, waxaa jira warar sheegaya yar oo kasta oo saameyn khatar ah ku saabsan peptide this. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad qabto maqaarka xasaasi ah, waxaa laga yaabaa in aad uga jawaab soo saarka anti-gabowga ah oo ka kooban peptide this. Qaar ka mid ah cadaanyo caadi yihiin oo casaada maqaarka, qaniinyo goobta codsiga, iyo finan. Haddii aad isku aragto mid ka mid ah arimahan marka aad isticmaalayso wax soo saarka ah anti-gaboobaya ay ku jiraan Palmitoyl Tripeptide-5, waa in aad la tasho dhakhtarka maqaarka isla markiiba si loo ogaado in ama aan peptide ku keenaya falcelinta ama haddii daawo kale oo guud ahaan laga yaabaa in doorasho wanaagsan aad. "Daacadda, Innovation, Rigorousness, iyo Karti" waa fikrad ka baxayn of our adag ee mudada dheer si ay si wadajir ah macaamiisha waayo, isdhaafsiga labada dhinac iyo Ajir is for maqaarka Daad Price qurxinta qaydhiin Waxyaabaha dayactirka Palmitoyl Tripeptide-5 / syn-coll / abuuro Powder Pal-kvk, Your taageero waa xooggiisa daa'imiska ah! Si diiran u soo dhaweyn macaamiisha gudaha iyo dibaddaba in ay booqdaan Shirkadda. "Daacadda, Innovation, Rigorousness, iyo Karti" waa fikrad ka baxayn of our adag ee mudada dheer si ay si wadajir ah macaamiisha waayo, isdhaafsiga labada dhinac iyo Ajir wadaagaan Palmitoyl Tripeptide-5, Palmitoyl Tripeptide-5 Powder, syn-coll abuuro, Waxaad had iyo jeer ka heli kartaa wax soo saarka iyo xal aad u baahan tahay si ay u leeyihiin in shirkadda our! Ku soo dhawow noo soo weyddiiya waxa ku saabsan wax soo saarka iyo wax waxaynu og nahay iyo waxaan kaa caawin karnaa in auto dayactir. Waxaan rajeynaynaa in aan idinla shaqeeyo xaaladda guul-guul ah.